sawehlor: HTML မိတ်ဆက်
ယနေ့အခါမှာ Internet ဟာ အလွန်ကျယ်ပြန့်လာပြီး လူတိုင်း နီးပါး အသုံးပြုနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာလည်း Internet ပေါ်မှာ ကိုယ်ပိုင်နေရာများအား ကိုယ်ပိုင် Homepage များဖြင့် အလွယ် တကူ ယူဆောင်နိုင်လေပြီ။ Internet ဆိုတာကို အလွယ်ရှင်းရရင်တော့ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကွန်ပျူတာများ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသော Network ကွန်ယက်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို Information တွေ ဖလှယ်ဖို့ အတွက် Web Page တွေကို ရေးဆွဲရပြီး Web Page ရေးဆွဲဖို့အတွက် ဆိုရင် HTML ဟာ အဓိက ကျပါတယ်။ ရေးသားထားတဲ့ Web Page တွေကို Web Browser Software နဲ့ ကြည့်ရှုရပါတယ်။ Web Broswer Software တွေထဲမှာတော့ Internet Explorer နဲ့ Firefox တို့က အဆင် ပြေဆုံးနဲ့ နာမည်ကြီးဆုံးတွေပါ။
1989 ခုက Tim Berners Lee နဲ့ Rober Calliau ဟာ Research Documents တွေကို ပိုမိုမြန်ဆန် ကောင်းမွန်မယ့် နည်းလမ်းကို ရှာဖွေ ခဲ့ပါတယ်။ ၂ နှစ် လောက်ကြာတော့ Berners Lee ဟာ browser တွေက ကြည့်ရှုဖတ်သားနိုင်ပြီး Tag များနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ နည်း ပညာတစ်ခုကို ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် အဲဒီ tage တွေထဲမှာ HyperQLink နဲ့ document အချင်း ချင်း ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ tag တွေပါ ထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ Berners Lee ရဲ့ နည်းပညာက Hyber Text Markup Language ဆိုတဲ့ HTML ပါပဲ။
Tag ဆိုတာကတော့ ရိုးရိုး Text တွေနဲ့ HTML code တွေကို ခွဲခြားလို့ရအောင် လုပ်ထားတာပါ။ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တော့ <b>This is bold </b> ဆိုရင် web browser နဲ့ ကြည့်ရင် စာလုံးဟာ bold ဖြစ်နေပါ လိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ <b> နဲ့ </b> တို့ ဟာ tag တွေပါ။ အများအားဖြင့် tag တွေဟာ အဖွင့်နဲ့ အပိတ် ပါပါတယ်။ အပိတ်ဆိုရင် / လေး ခံထားပေးရ ပါတယ်။
HTML အတွက် Editor
HTML အတွက် Editor တွေ IDE တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Dreamweaver အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ သူက HTML မ တတ်ရင်တောင် Website တစ်ခု ဆွဲ လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Dream-weaver ကို သုံးရင်တော့ HTML code တွေ သိလာမှာ မဟုတ်သလို တခြား website တွေကို ပြင်ရတာ လည်း ခက်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် တို့တွေ သူများတွေ ပေးထားတဲ့ website template ကိုပြင်ချင်တယ်၊ ကိုယ်ပိုင်သေသေချာချာ HTML code တွေကို သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လေ့လာကာစမှာ Notepad သုံးပြီး လေ့လာပါ။ လေ့ကျင့်ပါ။ HTML က website ဆွဲရတဲ့အထဲမှာ အလွယ် ဆုံးနဲ့ အခြေခံအကျဆုံးပဲ။
သူ့ကို သေသေချာချာ နား လည်ထားမှ တခြား web pro-gramming တွေဖြစ်ကြတဲ့ PHP, ASP.NET , JSP , Ruy On Rail တို့မှာ အထောက်အကူဖြစ်မှာပါ။
Notepad ဖြင့် စတင်ခြင်း
Windows Key + R ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ Run Dailog Box တက် လာပါမည်။ ထို့နောက် notepad လို့ ရိုက်လိုက်ပါ။
ပြီးလျှင် OK ကို နှိပ်ပါ။ ဒါဆို ရင် notepad တက်လာပါလိမ့်မယ်။
Notepad ထဲတွင် Format အောက်က word warp ကို check လုပ်ထားပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ Word Warp က Notepad မှာ စာရိုက် တာ ပြည့်သွားရင် အောက်တစ် ကြောင်း ဆင်းသွားရန်အတွက် ဖြစ် ပါတယ်။
Notepad ထဲတွင် အောက်ပါ အတိုင်း ရေးသားလိုက်ပါ။
This is body</body>
HTML နဲ့စပြီး HTML နဲ့ ပြန် ပိတ်ရပါတယ်။ အဲဒီကြားမှာ html code တွေ ရေးရပါတယ်။ Head Tag နဲ့ Head Tag အပိတ်ကြားတွင် Title
ထည့်ထားသည်ကို တွေ့ရမည်။ Title သည် Browser ၏ ထိပ် bar တွင် တွေ့မြင်ရန် ဖြစ်တယ်။ Body အဖွင့် နဲ့ အပိတ်ကြားမှာ မိမိ၏ နှစ်သက်ရာ စာများ ရေးသားနိုင်ပါတယ်။
အဲဒါကို တနေရာမှာ save သွင်းလိုက်ပါ။ Save Dialog box တက်လာရင် filetype ကို All file လို့ ပေးလိုက်ပါ။ file name ကို firstrun. html လို့ ပေးလိုက်ပါ။ firstrun သည် မိမိ၏ နှစ်သက်ရာနာမည် ပေးနိုင်ပါ တယ်။ .html ဟာ file extension ဖြစ်တယ်။ HTML ရေးထားသော page များကို .html နှင့် .htm လို့ ပေးမှသာ browser တွင် ပေါ်ပါ လိမ့်မယ်။
Save လုပ်လိုက်သော file လမ်းကြောင်းကို သွားလိုက်ပါ။ first. html file လေးကို double click လုပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ။
ဒါဆို page လေးတစ်ခု တက် လာတာကို မြင်ရပါမယ်။
ထိပ်ပိုင်းတွင် File ပတ်လမ်း ကြောင်းကို address bar တွင် တွေ့ရ မည် ဖြစ်ပါတယ်။
Title tag ထဲတွင် ရေးထား သော This is title ဆိုသော စာကို Windows ၏ Title bar နှင့် Tab Title bar တို့တွင် တွေ့ရမည်။ Body tag ထဲတွင် ရေးထားသော This is body ဆိုသော စာသားကို စာမျက်နှာအဖြူ ပေါ်တွင် ပေါ်နေသည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
IE7 မှာ ဆိုရင် Page > View Source ကို နှိပ်လိုက်ပါက Notepad နဲ့ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ HTML ပွင့်လာပါ မယ်။
IE6မှာ ဆိုရင် View > Source ကို နှိပ်လိုက်ပါက Notepad နဲ့ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ HTML ပွင့်လာ ပါမယ်။
အဲဒီမှာ ရေးထားတဲ့ code တွေကို ဖတ်နိုင်သလို ကိုယ့်စက်ထဲမှာ ရေးထားတဲ့ page ဆိုရင်တော့ ပြင်ပြီး တစ်ခါတည်း save လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Internet ပေါ်က Website တွေကို တော့ view > source ကနေ ဖွင့်ပြင် ပြီး save လုပ်လို့ မရပါဘူး။
Posted by saw ehlor at 21:45